« La reconnaissance est la mémoire du cœur » Hans Christian Anderson
Noho ny hasarotan’ny fiainana, noho ny hamafin’ny fitadiavana dia miha-miova ny toe-tsaina. Tsy dia hita taratra amin’ny fiaraha-monina intsony izany fahaizana mizara sy mankasitraka izany.
Raha misy olona mividy zavatra amin’ireny epicerie ireny dia tsikaritra fa tsy mba misy misaotra loatra fa azo ny entana novidiana dia lasa. Raha misy olona mifanakaiky toerana eny ambony taxi-be ka misakafo ny iray ohatra dia tsy mba mizara na manasa akory fa mihinan-drery izy ary tahaka ny mandeha ho azy izany aminy. Raha misy olona namonjy tamin’ny sarotra kosa ka nanome vola noho ny fahamaizana isa-karazany dia mahavariana fa iny olona namonjy iny indray no sahirana vao hahazo ny volany any aoriana, havezivezy, hapetrapetraka… tsy mba tsaroana ilay soa nataon’ilay olona satria izay hihinanan’ny vava no hatao, tsy misy izany fankasitrahana sy fanajana ny teny nomena izany. Tsy mahagaga noho izany raha fiaraha-monina itoeran’ny lonilony sy ny tsy fanajana eto amintsika. Tsotra anefa ny manarina izany : fenoina fitiavana ny fo, ampiana fandeferana dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra, tsy ilana ezaka intsony akory izany mankasitraka sy mizara izany.